I-Scottish Surnames Iintsingiselo kunye neeNqalo
Lithini Igama Lakho LaseScotland?
Amagama aseScotland njengoko sibaziyo namhlanje - amagama omndeni adlulileyo acacile esuka kubaba ukuya kwindodana ukuya kumzukulu - aqale aqaliswe eSkotland ngabaNorman malunga nonyaka we-1100. Ukusetyenziswa kwamagama aqingqiweyo aseScotland (amagama okugqibela ayengatshintshi kwisizukulwana ngasinye) ayengasetyenziswa ngokugqithiseleyo kude kube ngekhulu le-16 leminyaka, kwaye kwakukudala ngasekupheleni kwekhulu le-18 ngaphambi kokuba amagama aqheleke kwiiNtlanzi naseziqithini ezisentla.
Imvelaphi yeSurnames yeSurnames
Amagama aseScotland ngokubanzi aveliswe kwimithombo emine engundoqo:
Amagama eSigxina okanye amaSurname weNgingqi -Awa magama avela kwindawo yokuhlala kwikhaya apho umphathi wokuqala kunye nentsapho yakhe behlala khona, kwaye ngokuqhelekileyo imvelaphi eqhelekileyo yabamaScottish. Uninzi lwabantu bokuqala eScotland ukufumana amagama egqityiweyo beembeko kunye nabanini bamhlaba abaninzi, ababehlala bebizwa ngokuba yilizwe abanalo (umzekelo uWilliam de Buchan waseBuchan, eScotland). Ekugqibeleni, nabo abo babengenawo umhlaba obalulekileyo baqala ukusebenzisa amagama okubeka indawo ukuba bazibonele kwabanye abantu, bafumana igama lommolophana okanye nesitalato apho usapho lwavela khona. Abaqashi bahlala bethabatha igama labo kwindawo ababehlala kuyo. Ngako ke, uninzi lwamagama okuqala eScotland afunyanwa ngamagama eendawo. Amagama amagama aphezulu avela kwiindawo ezingacacileyo zendawo kuneendawo ezithile, nazo ziwela kule nqanaba. La magama angabhekisela kwizinto ezibonakalayo ezifana nemifula (i-Burns), i-moors (i-Muir) okanye ihlathi (i- Wood ) okanye izakhiwo ezenziwe ngabantu, njenge-castle okanye i-mill (Milne).
Amagama eSurnational Occupational Amagama amaninzi aseScotland aphuhliswe kumsebenzi womntu okanye urhwebo. Abantu abathathu baseScotland abaqhelekileyo - uSmith (umkhandi), uStewart (umphathi) kunye noTloron (umlingisi) - ziyimimiselo emihle yale nto. Amaziko anxulumene namazwe okumkani kunye / okanye ukuzingela enye imvelaphi eqhelekileyo yamagama aseScottish yomsebenzi - amagama anjenge-Woodward, Hunter kunye neHlathi.
Amagama Amagama achaza - Ngokusekelwe kumgangatho oyingqayizivele okanye uphawu lomntu ngamnye, ezi ziqhamo zivame ukuvela kumagama omnxeba okanye amagama eepestile. Uninzi lubhekisela kwimbonakalo yomntu - umbala, umbala okanye isimo somzimba - njengeCampbell (ukusuka kwi- caimbeul , okuthetha "umlomo okhohlakeleyo"), iDuff (Gaelic for "dark") kunye noFortbain ("umntwana omhle"). Ifayili echazayo inokubhekisela kumntu womntu okanye iimpawu zokuziphatha, ezifana ne-Godard ("udidi oluhle") kunye noHardie ("ukhaliphe okanye ukhaliphe").
I-Patronymic ne-Matronymic I-Surnames - Lezi zigama ezivela kumabhaptizo okanye ngamaKristu ukubonisa ulwalamano lwentsapho okanye inzala. Abanye abhaptizwayo okanye banikezwa ngamagama baye baba ngamazina ngaphandle kokutshintshwa kwifomu. Abanye bangeze iqela okanye isiphelo. Ukusetyenziswa kweMac no- Mc kwakusasazeke kulo lonke elaseScotland, kodwa ngokukodwa kwii-Highlands, ukubonisa "unyana" (umzekelo uMackenzie, unyana kaConneach / Kenneth). Ezikolweni zaseScotland, isiqulatho -sononi yayidla ngokuqhelekileyo kwongezwa igama likabawo ukuba lenze igama lomnxeba. Ezi ziqununu ezichanekileyo zitshintshwe kwisizukulwana ngasinye esilandelayo. Ngaloo ndlela, unyana kaRobert, uJohn, unokuthiwa nguJohn Robertson. Unyana kaYohane, uMangus, uya kuthiwa nguMangus Johnson , njalo njalo. Olu hlobo lokwenzela igama lokubhala igama lugcinwa kwiintsapho ezininzi kude kubekho inkulungwane yeshumi elinesihlanu okanye yeshumi elinesibhozo ngaphambi kokuba igama lentsapho ligqitywe ngokugqithiseleyo elidlulileyo lingaguqukanga lisuka kubaba kuyise.
Amagama aseScottish Clan
Izizwe zaseScotland, ezivela kwi-Gaelic clann , elithetha "intsapho," lenze isakhiwo esisemthethweni sokwandisa iintsapho ezahlukileyo. Amacandelo ngamnye achazwe kwindawo yendawo, ngokuqhelekileyo yindwendwe yamadala, kwaye alawulwa yiNtloko yeClan, ebhaliswe ngokusemthethweni nenkundla yeNkosi uLyon, uKumkani weeArms olawula i-Heraldry kunye neCat of Arms Registration eScotland. Ngokomlando, indlu yenziwe ngumntu wonke owayehlala kwintsimi yintloko, abantu ababejongene naye kwaye ngubani na oboleka ukuthembeka kuye. Ngaloo ndlela, akusiwo wonke umntu kwintsapho enxulumene nezofuzo, kwaye onke amalungu omndeni ayenayo ifani enye.
UAnderson, uCampbell, MacDonald, Scott, Smith, Stewart ... Ngaba ungowinye yezigidi zabantu abantu bezemidlalo enye yezona zi-100 eziqhelekileyo eziqhelekileyo zeSkotland?
Ukuba kunjalo, ngoko uya kufuna ukukhangela uludwe lwethu lwegama eliqhelekileyo eliqhelekileyo eScotland, kuquka iinkcukacha malunga nemvelaphi yegama ngalinye, intsingiselo, kunye nokuchonga okunye.
I-TOP 100 IMITHETHO YEZIKHOKHELWANO ZEZIKHOKHELWANO NEEMISEBENZI ZAKHO
1. SMITH 51. URUSSELL
2. I- BROWN 52. MURPHY
3. IWILSON 53. I- HUGHES
4. CAMPBELL 54. WRIGHT
5. STEWART 55. STHERTHERLAND
6. I-ROBERTSON 56. GIBSON
7. UTOMSON 57. IGORDON
8. U- ANDERSON 58. WOOD
9. FUNDA 59. BURNS
10. IMACDONALD 60. I-CRAIG
11. SCOTT 61. ICUNNINGHAM
12. MURRAY 62. I- WILLIAMS
13. I- TAYLOR 63. IMILI
14. QALISA 64. UYOHNSTONE
15. HLAWULA 65. STEVENSON
16. MITCHELL 66. MUIR
17. UTHILE 67. WILLIAMSON
18. IROSS 68. MUNRO
19. AMANZI 69. MCKAY
20. GRAHAM 70. IBRUCE
22. HENDERSON 72. I- WHITE
23. UPATERSON 73. IMALI
24. UMORRISON 74. I-DOUGLAS
25. MALI 75. ISICALA
26. DAVIDSON 76. RITCHIE
27. UKUQALA 77. UKUFUNDA
28. INKQUBO 78. UKUVULA
29. MARTIN 79. MCMILLAN
30. KERR 80. AMANZI
31. HAMILTON 81. UBUYLE
32. ICAMERON 82. I- CRAWFORD
33. KELLY 83. UMGQUBO
34. UYOHNSTON 84. JACKSON
35. DUNCAN 85. HILL
36. FERGUSON 86. SHAW
37. HUNTER 87. UKRISTU
38. SIMPSON 88. INKOSI
39. ALLAN 89. UMHLA
40. BELL 90. IMACLEAN
41. UKUQALA 91. I- AITKEN
43. MCLEAN 93. ICURRIE
44. IMACLEOD 94. UDICKSON
45. MACKAY 95. IGREEN
46. IJONES 96. MCLAUGHLIN
47. WALLACE 97. IJAMIESON
48. I- BLACK 98. NINI
49. MARSHALL 99. MCINTOSH
50. IKENNEDY 100. IKHADI
Umthombo: Iirekhodi zeSizwe zaseScotland - ezininzi eziqhelekileyo amagama, ngonyaka ka-2014
Intetho kunye Nemvelaphi ka Nguyen
Amagama okugqibela ase-Irish: amagama aqhelekileyo ase-Ireland
INQUBO YENKULUNKULU YENKQUBO YENKQUBO NOMBHALO
Injongo kunye Nemvelaphi yegama lokugqibela elithi 'uTomas'
WARD Igama Igama kunye Nemvelaphi
ISISHWANKATHELO SOMSEBENZI Injongo kunye Nemvelaphi
Injongo Nenkcazo ye-Fuel Injector Pulse Width
Agnosticism noTomas Henry Huxley
St. Mark uMvangeli: Umbhali weBhayibhile kunye noMphathiswa oyiNgcwele
Iindawo ezigqibeleleyo zokuthengisa iiNcwadi eziSebenzisiweyo kwi-Intanethi
Amaqiniso Ngomkhukula kaNowa
IiNkcukacha zeeKholeji zeWofford
Ubungqina bobuchwephesha kunye novavanyo lwe-Salem Witch
Itheyibhile yeSonka sokubonisa
Irrealis 'Were' (igrama)
Iikholeji eziphezulu zaseKansas
I-Bacone College Admissions
Imisebenzi ephezulu ye-American Idol ye-All-Time
Ukukhahlela i-Solar House Designs Ukususela kwi-Solar Decathlon
Iimpawu ze-10 eziphezulu ze-1980
Amazwi anomdla malunga noNelson Mandela
Iinqununu ezine ezineNqabileyo zobuBuddha
Iindlela Ezinkulu zokufunda isiJamani kwi-Free kwi-Free